समाचार - दमकल फोम कत्तिको सुरक्षित छ?
अग्निशामक दम्पतीले जटिल जल-निर्माण फोम (एएफएफएफ) को प्रयोग गर्न कठिन पछाडि लडाई गर्ने आगोलाई रोक्न मद्दत गर्दछन्, विशेष गरी आगोमा पेट्रोलियम वा अन्य ज्वलनशील तरल पदार्थहरू - जसलाई कक्षा बी आगोको रूपमा चिनिन्छ। यद्यपि, सबै आगो निभाउने फोमहरूलाई एएफएफएफको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छैन।
केहि एएफएफएफ फार्मुलेसनले रसायनको वर्ग समावेश गर्दछ पर्फ्लोरोकेमिकल्स (पीएफसी) र यसले सम्भावितताको बारेमा चिन्ता उठाएको छ भूमिगत पानीको दूषित एएफएफएफ एजेन्टको प्रयोगबाट स्रोतहरू जुन पीएफसीहरू समावेश गर्दछ।
मे २००० मा 3M कम्पनी भने यसले इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लोरिनेसन प्रक्रिया प्रयोग गरेर PFOS (perfluorooctanesulphonate) मा आधारित फ्लोरोसुरफेक्टन्ट उत्पादन गर्दैन। यस भन्दा पहिले, फायर फाइटिंगमा प्रयोग हुने प्राय: जसो पीएफसीहरू PFOS र यसको डेरिभेटिभहरू हुन्।
AFFF द्रुत रूपमा ईन्धनको आगो निभाउँदछ, तर तिनीहरू PFAS समावेश गर्दछ, जुन perf र polyfluoroalkyl पदार्थहरूको लागि खडा हुन्छ। केहि PFAS प्रदूषण फायर फाइटिंगको प्रयोगबाट उत्पन्न हुन्छ। (फोटो / संयुक्त बेस सैन एन्टोनियो)
आगो उपकरणको लागि 'नयाँ सामान्य' विचार गर्दै
डेट्रोइटको नजिक 'रहस्य फोम' को विषाक्त प्रवाह PFAS थियो - तर कहाँबाट?
कन्या प्रशिक्षणको लागि प्रयोग गरिएको आगो फोमले गम्भीर स्वास्थ्य, वातावरणीय जोखिम निम्त्याउन सक्छ
पछिल्ला केही वर्षहरूमा फायर फाइटिंग उद्योग विधायी दबाबको परिणाम स्वरूप पीएफओएस र यसको डेरिभेटिभबाट टाढा सार्यो। ती निर्माताहरूले फ्लोरोकेमिकलहरू प्रयोग नगर्ने अग्निशमन फोमहरू बिकास र मार्केटमा ल्याए, जुन फ्लोरिनमुक्त छ।
फ्लोरिन मुक्त फोमका निर्माताहरू भन्छन कि यी फोमाहरूले वातावरणमा कम प्रभाव पार्छ र अग्निपूजक आवश्यकताहरू र अन्त-प्रयोगकर्ता अपेक्षाहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृतिहरू पूरा गर्दछ। जे होस्, आगो निभाउने फोमहरूबारे वातावरणीय चिन्ताहरू अझै छन् र यस विषयमा अनुसन्धान जारी छ।
फोम समाधानको पानीबाट (पानी र फोम केन्द्रितको संयोजन) बाट वातावरणमा सम्भावित नकारात्मक प्रभावको वरिपरि चिन्ताहरू केन्द्रित हुन्छन्। प्राथमिक मुद्दाहरू भनेको विषाक्तता, जैववृद्धि, दृढता, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरूमा उपचारयोग्यता र माटोको पोषण लोड हो। यी सबै चिन्ताको विषय हो जब फोम समाधानमा पुग्दछ प्राकृतिक वा घरेलु पानी प्रणाली।
जब पीएफसी युक्त एएफएफएफ लामो समयको लागि एकै ठाउँमा बारम्बार प्रयोग गरिन्छ, पीएफसी फोमबाट माटोमा र त्यसपछि जमिनको पानीमा सर्न सक्छ। भूगर्भीय पानीमा प्रवेश गर्ने पीएफसीको मात्रा, प्रयोग गरिएको AFFF को प्रकार र मात्रामा निर्भर गर्दछ, जहाँ प्रयोग भएको थियो, माटोको प्रकार र अन्य कारकहरू।
यदि निजी वा सार्वजनिक कुवाहरू नजिकै अवस्थित छन् भने, तिनीहरू सम्भवतः पीएफसीले प्रभावित गर्न सक्थे जहाँबाट एफएफएफ प्रयोग गरिएको थियो। यहाँ मिनेसोटाको स्वास्थ्य विभागले प्रकाशित गरेको कुराको एक झलक छ; यो धेरै राज्यहरु मध्ये एक हो प्रदूषणको लागि परीक्षण।
“२०० 2008-२०१। मा, मिनेसोटा प्रदूषण नियन्त्रण एजेन्सी (एमपीसीए) ले राज्यको वरपर १ AF एफएफएफ साइटहरूमा माटो, सतह पानी, भूजल, र तलछट परीक्षण गर्‍यो। उनीहरूले केहि साइटहरूमा उच्च स्तरको पीएफसीहरू पत्ता लगाए, तर प्रायः जसो अवस्थामा संदूषणले ठूलो क्षेत्रलाई असर गर्दैन वा मानव वा वातावरणलाई खतरामा पार्दैन। दुल्थ एयर नेश्नल गार्ड बेस, बेमिदजी एयरपोर्ट, र वेस्टर्न एरिया फायर ट्रेनिंग एकेडेमी - तीन साइटहरू पहिचान गरियो जहाँ पीएफसीहरू यत्रो फैलिएको थियो कि मिनेसोटा स्वास्थ्य विभाग र एमपीसीएले नजिकैको आवासीय कुवाहरूको परीक्षण गर्ने निर्णय गर्यो।
“यो पीएफसी युक्त एएफएफएफ बारम्बार प्रयोग गरिएको स्थानहरू नजिकै हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, जस्तै आगो प्रशिक्षण क्षेत्र, एयरपोर्टहरू, रिफाइनरीहरू र रासायनिक प्लान्टहरू। एक पटक एफएएफएफको आगोसँग लड्नको लागि कम प्रयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ, जबसम्म एफएफएफको ठूलो खण्डहरू प्रयोग गर्दैनन्। यद्यपि केही पोर्टेबल अग्निशामक उपकरणले पीएफसी युक्त एएफएफएफ प्रयोग गर्न सक्दछ, यति थोरै रकमको एक पटक प्रयोगले भूजललाई खतरामा पार्ने सम्भावना कम हुन्छ। ”
फोम / पानी समाधानको डिस्चार्ज सम्भवतः निम्न अवस्थाका एक वा बढी परिणामको रूपमा हुनेछ:
मैन्युअल फायर फाइटिंग वा ईन्धन कम्बलिंग अपरेशनहरू;
प्रशिक्षण अभ्यास जहाँ दृश्यहरुमा फोम प्रयोग भइरहेको छ;
फोम उपकरण प्रणाली र वाहन परीक्षण; वा
फिक्स्ड प्रणाली रिलीज।
स्थान जहाँ यी घटनाहरू मध्ये एक वा बढी सम्भवतः हुने हुने विमान सुविधाहरू र फायर फाइटर प्रशिक्षण सुविधाहरू समावेश गर्दछ। विशेष जोखिम सुविधाहरू, जस्तै ज्वलनशील / खतरनाक सामग्री गोदामहरू, थोक ज्वलनशील तरल भण्डारण सुविधाहरू र खतरनाक फोहोर भण्डारण सुविधाहरू पनि सूची बनाउँदछन्।
अग्निशमन अभियानको लागि यसको प्रयोग पछि फोम समाधानहरू संकलन गर्न यो अत्यधिक वांछनीय छ। फोम कम्पोनेन्टको बाहेक, फोम धेरै सम्भावित ईन्धन वा आगोमा संलग्न ईन्धनहरूद्वारा दूषित हुन्छ। नियमित खतरनाक सामग्री कार्यक्रम अब छुटेको छ।
एक खतरनाक तरल मुछिएको स्पिलहरूको लागि प्रयोग गरिएको म्यानुअल कन्टेन्मेन्ट रणनीतिहरू नियोजित गर्नुपर्दछ जब सर्तहरू र स्टाफिंग अनुमति। यसमा फोक्स / पानी समाधानलाई फोहोर पानी प्रणालीमा प्रवेश नगर्न वा वातावरणलाई जाँच नगरी रोक्नका लागि आँधी नालीहरू रोकिनु समावेश छ।
डिमिंग, डिकि and र डाइभर्ट जस्ता रक्षात्मक रणनीतिहरू फोम / पानी समाधान कन्टेन्टको लागि उपयुक्त ठाउँमा पाउनको लागि प्रयोग गरिनुपर्दछ जबसम्म यो खतरनाक सामग्री सफा ठेकेदारले हटाउन सक्नुहुन्न।
फोमको साथ प्रशिक्षण
त्यहाँ धेरै डिजाइन गरिएका प्रशिक्षण फोमहरू उपलब्ध छन् जुन धेरै फोम निर्माताहरूले प्रत्यक्ष प्रशिक्षणको क्रममा AFFF नक्कल गर्छन्, तर पीएफसी जस्तो फ्लुरोसुरफेक्टन्टहरू समावेश गर्दैन। यी प्रशिक्षण फोमहरू सामान्यतया बायोडिग्रेडेबल हुन्छन् र न्यूनतम वातावरणीय प्रभाव हुन्छन्; तिनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा प्रशोधनका लागि स्थानीय फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टमा पनि पठाउन सकिन्छ।
प्रशिक्षण फोममा फ्लुरोसुरफेक्टन्टहरूको अनुपस्थितिको अर्थ त्यो फोमहरू कम बर्न-ब्याक प्रतिरोध हुन्छ। उदाहरण को लागी, प्रशिक्षण फोम एक ज्वालाग्रस्त तरल पदार्थ आगो मा एक प्रारम्भिक बाफ बाधा प्रदान गर्दछ विष्फोटको परिणामस्वरूप, तर त्यो फोम कम्बल चाँडै बिग्रिनेछ।
यो प्रशिक्षकको दृष्टिकोणबाट राम्रो कुरा हो किनकि यसको मतलब तपाईंले थप प्रशिक्षण परिदृश्यहरू सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ किनकि तपाईं र तपाईंको विद्यार्थीहरू प्रशिक्षण सिम्युलेटर फेरि बर्न तयार हुन पर्खिरहेका छैनन्।
प्रशिक्षण अभ्यासहरू, विशेष गरी ती वास्तविक फिम प्रयोग गर्नेहरूमा, खर्च गरिएको फोमाहरूको स for्कलनको लागि प्रावधान समावेश हुनुपर्छ। कम से कम, आगो प्रशिक्षण सुविधाहरूमा फोहोर समाधान स collect्कलन गर्न क्षमता हुनुपर्दछ फोहोर समाधानलाई फोहोर पानी उपचार सुविधामा डिस्चार्जका लागि प्रशिक्षण परिदृश्यहरूमा प्रयोग गर्न।
त्यो डिस्चार्ज हुनु अघि फोहोर पानी उपचार सुविधालाई सूचित गरिनु पर्दछ र दमकल विभागलाई एजेन्टको तोकिएको दरमा छोड्ने अनुमति दिइनु पर्दछ।
निश्चित रूपमा कक्षा ए फोम (र सम्भवतः एजेन्ट रसायनशास्त्र) को लागि प्रेरण प्रणालीमा भएका प्रगतिहरू अघि बढ्न जारी रहनेछ किनकि यो विगत दशकमा भयो। तर कक्षा बी फोम केन्द्रित रूपमा, एजेन्ट रसायन विज्ञान विकास प्रयासहरू अवस्थित आधार प्रविधिहरूमा निर्भरताका साथ समयमै स्थिर भएको देखिन्छ।
विगत दशकको अवधिमा वा वातावरणीय नियमहरूको परिचय भएदेखि नै फ्लोरिनमा आधारित एएफएफएफहरूले अग्निशमन फोम निर्माताहरूले विकासलाई गम्भीरताका साथ लिएका छन्। यी मध्ये केही फ्लोरिनमुक्त उत्पादनहरू पहिलो पुस्ता हुन् र अरूहरू दोस्रो वा तेस्रो पुस्ता।
तिनीहरू ज्वलनशील र दहनशील तरल पदार्थमा उच्च प्रदर्शन हासिल गर्ने, फायर फाइटर सुरक्षाको लागि सुधारिएको बर्न-ब्याक रेसिस्टन्स र प्रोटिनबाट उत्पन्न फोमहरूमा धेरै वर्षसम्म शेल्फ लाइफ प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ एजेन्ट रसायन र दाउरा दुबै प्रदर्शन दुवैमा विकास गर्न जारी राख्नेछन्।